Macau: Fibahanana ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2019 13:37 GMT
Nahita ireo mpiserasera aterineto avy any Macau fa namelona ny rafitra fanivanana miankina amin'ny voambolana lehibe ny sehatra fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra ao Macau, cyberctm ary nanaisotra ny teny hoe “Lehiben'ny mpanatanteraka” sy ny solony “Lehiben'ny Mpangalatra”
Ny antsoina hoe “Lehiben'ny Mpanatanteraka” na CE (amin'ny teny Shinoa 特首) no filohan'ny Fari-pitantanana Manokana ao Macau ary i Edmund Ho Hau Wah no C.E amin'izao fotoana ary ny ho mpandimby azy dia Fernando Chui Sai On. Tao anatin'ny roa taona, dia voasaringotra tamin'ny tantaran-kolikoly misy ifandraisany amin'i Ao Man Long i Edmund Ho ary rehefa mipoitra ny teny hoe “CE / 特首), dia matetika misy ifandraisany amin'ny fanehoan-kevitra miiba.” Maro koa ny mpiserasera aterineto mampiasa ny teny hoe “Lehiben'ny Mpangalatra 賊首” mba hanoloana ny hoe “CE “.
Tamin'ny 17 Oktobra, nahatsikaritra ny mpisera cyberctm 星 殺 iray fa nibahana ny teny Sinoa hoe “C.E / 特首” koa ilay forum. Na izany aza, rehefa mampiditra tahala (espace) ao anatiny sy anelanelan'ny teny, dia miseho ilay teny.
Nahasarika ireo mpisera aterineto mba hanao fanandramana ny lahatsoratra. Nahita ny mpisera 不 動 iray fa rehefa ampiarahana amin'ny loko samihafa ireo teny roa, dia tsy handairan'ny sivana. Nahita koa ny mpisera gdeleuze fa ny sivana any Macau dia tsy mitovy amin'ny an'i Shina namany satria tsy voasivana ny teny saro-pady toy ny “4 Jiona”, “Falungong”, “CCP”, “hetsika demokratika 89″. Na izany aza, nahatsikaritra i 愛 瞞 停 轉 日 fa voasivana ny teny “Lehiben'ny Mpangalatra -賊首. Mazava ho azy fa afaka mamela elanelana foana ny mpampiasa na mampiditra teboka ao anatiny sy eo anelanelan'ireo teny roa ireo.
31 Mey 2021Azia Atsinanana